कोरोना भाइरसको औषधी रुसमा बन्यो, ११ जुन देखि प्रयोगमा ल्याइने
> कोरोना भाइरसको औषधी रुसमा बन्यो, ११ जुन देखि प्रयोगमा ल्याइने
१८ जेष्ठ २०७७, आईतवार १५:२१
एजेन्सी, १८ जेठ । खुशीको खबर ! कोरोना भाइरसविरुद्धको औषधी बनेको छ । रुसले विकास गरेको औषधी अर्को महिनाबाट प्रयोगमा ल्याइने भएको छ ।
रुसी समाचार संस्था तासका कोभिड १९ को औषधी विकास भइसकेको छ । रुसले कोरोनाविरुद्व लड्न अविफाविर नाम गरेको ओषधी निर्माण गरेको हो । ११ जुन देखि औषधीको प्रयोग कोरोना संक्रमित व्यक्तिमाथि रुसी अस्पतालले गर्नेे रुसी पत्रिकामा उल्लेख गरिएको छ ।
औषधी निर्माण गर्ने कम्पनीले कोरोनाविरुद्वको औषधी निः शुल्क नबेच्ने जनाइएको छ । प्रयोग भने मेडिकल निगरानीमा गरिने जनाइएको छ । अविफाविर औषधीले रुसी स्वास्थ्य मन्त्रालययबाट स्वीकृत पाइसकेको छ । उक्त औषधीको करिब १८ नमुना तयार भई अस्पतालमा वितरण गर्न तयार रहेको छ । कम्पनीले प्रत्येक कहिना ६० हजार प्याक औषधी निर्माण गर्न सक्ने बताएको छ ।
विश्वभर कोरोना भाइरसविरुद्ध अनेकन औषधीको प्रयोग भइरहेको छ । तर, विश्व स्वास्थ्य संगठनले कुनैलाई पनि सदर गरेको छैन ।
यसअघि अमेरिकाले रेमडेसिभिर र भारतले हाइड्रोक्सिक्लोरोकिन प्रयोगमा ल्याएका छन् । तर, डब्लुएचओले ती औषधीबाट नरारात्मक असर पर्ने भनेको थियो । रुसले प्रयोगमा ल्याउन लागेको औषधीबारे पनि कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन । यसलाई डब्लुएचओले मान्यता दिने नदिने टुंगो लागेको छ ।
सँसारभर एक सयभन्दा बढी कम्पनि र प्रयोगशाला कम्पनिहरु कोरोना भाइरसविरुद्धको औषधी र खोप विकासमा सक्रिय छन् । तर, कसैले पनि सफलता हासिल गरिसकेका छैनन् । कम्पनिहरु औषधी र खोप विकासको क्रममा छन् । अमेरिका, चीन, भारत, अष्ट्रेलिया, इजरायल, जापान, थाइल्यान्ड, जर्मनी, बेलायतलगायका देशका कम्पनिहरु खोपको विकासमा सक्रिय भइरहेका छन् ।
चीनबाट एकै दिन आइपुग्यो थप ४४ लाख डोज खोप
थप ६९५१ जना संक्रमण, ९८४१ निको भए
थप ६९३९ जनामा कोरोनाभाइरसको संक्रमण पुष्टिः ७ हजार २२६ जना निको
थप ६७१४ जनामा संक्रमण पुष्टि
थप ८६०७ जनामा कोरोनाभाइरस संक्रमण पुष्टि, १७७ को मृत्यु
पछिल्लो २४ घण्टामा थप ८३०५ जनामा कोरोना पुष्टि, १९० को मृत्यु
अनेरास्वबियु केन्द्रीय कमिटीमा सुमन पाण्डे 'सुमन्त' मनोनित : कार्य क्षेत्र काठमाडौं ।
एकीकृत समाजवादीले पदाधिकारी टुंग्यायो, रामकुमारी सचिव ।
मन्त्रिपरिषद विस्तार भोलिसम्म हुन्छ : प्रवक्ता महरा ।
चैनपुरका प्रहरी प्रमुख खतिवडा बने भदौ महिनाको सर्वोत्कृष्ट प्रहरी
राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा डा. नारायण खड्का परराष्ट्रमन्त्री पदमा नियुक्त
सिन्धुपाल्चोक काङ्ग्रेसले अघि बढायो जोशिला युवा मुकेश सेन्चुरि लाई,क्षेत्रीय प्रतिनिधिमा निर्बिरोध निर्वाचित
गुल्मीमा पहिरोले घर पुरिँदा एकै परिवारका तीन जना दिदी बहिनीको मृत्यु
६ आश्विन २०७८, बुधबार १०:२४
६ आश्विन २०७८, बुधबार १५:४७
By Dilip Paudel
काठमाडौं , असोज ६ । प्रदेश प्रहरी कार्यलय प्रदेश नं १ बिराटनगर ले भदौ महिनाको सर्वोत्कृष्ट प्रहरी घोषणा गरेको छ।२१...
६ आश्विन २०७८, बुधबार ०९:३९
तम्घास,६ असोज । गुल्मीमा गए राति अविरल वर्षासँगै आएको पहिरोले घर पुरिँदा एकै परिवारका तीन जना दिदी बहिनीको ज्यान गएको...
६ आश्विन २०७८, बुधबार १८:२५
काठमाडौं, असोज ६ । नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले मन्त्रिपरिषद विस्तार भोलि हुने बताएका छन् । बुधबार पार्टीको स्थायी...
६ आश्विन २०७८, बुधबार १२:३०
काठमान्डौं ,६ असोज । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले डा. नारायण खड्कालाई मन्त्री पदमा नियुक्त गरेकी छन् । राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको संविधानको...